Turkish airlines oo xafiis cusub ka furtay Muqdisho [Sawiro] | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Turkish airlines oo xafiis cusub ka furtay Muqdisho
Turkish airlines oo xafiis cusub ka furtay Muqdisho [Sawiro]
Shirkadda Diyaaradaha Caalamiga ah ee Turkish airlines ayaa markii ugu horaysay xafiis cusub waxaa ay ka furtay magaalada Muqdisho ayadoo sidoo heshiis la gashay shirkad oo lagu magacaabo Light travel agency.
Xafiiska la furay ayaa waxaa uu ku yaala Agagaarka isgoyska KM4 ee Magaalada Muqdisho.
Dadka Soomaaliyeed ayaa wixii hadda ka bilowda waxaa ay adeeg shirkadda ay heli doonaan xafiiskaas halka markii hore ay ka aadi jireen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Agaasimaha Shirkadda Diyaaradaha Turkish airlines ee Soomaaliya Ebubekir Ikici ayaa xarigga ka jeray xafiiska ay wadaagi doonaan Shirkadda Diyaaradaha Turkish airlines iyo shirkadda ay heshiiska galeen, kaasi oo ku yaala Magaalada Muqdisho.
Maamulaha Shirkadda adeegga diyaaradaha ee Light travel agency Ibraahim Maxamed Sheekh oo shir jara’iid ku qabtay Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Shirkadooda ay qaban doonto adeeg walba oo shacabka Soomaaliyeed ay uga baahan yihiin shirkadda diyaaradaha dalka Turkiga Turkish airlines.
Maamulaha Waxaa uu sheegay heshiiskan dhexmaray Light travel iyo Turkish airlines uu Shacabka Soomaaliyeed u abuuri doono Shaqo badan, islamarkaana ay tikidhada shirkadda Diyaaradaha Turkish airlines ay ku heli doonaan qiimo ka jaban qiimihii hore.
“Heshiiskan cusub waa kii ugu horeeyay Shirkadda diyaaradaha Caalamiga ah ee Turkish airlines ay la gasho shirkad Soomaaliyeed waa taarikhi dadka Soomaaliyeedna ay u fudadaan doontaan inay isticmaalaan shirkaddaasi” ayuu yiri Maamulaha shirkadda Light travel agency Ibraahim Maxamed Sheekh.
Shirkadda light travel agency ayaa waxaa ay tahay shirkadda kali ah ee awooda u leh inay iibiso tikidhada Turkish airlines.
Agaasimaha Turkish airlines u qaabilsan Soomaaliya Ebubekir Ikici, oo waraysi gaar ah siiyay Wargayska Xaqiiqa Times ayaa waxaa uu sheegay in Shirkadda Diyaaradaha Turkish airlines aanay qaban wax wal-wel ah oo ku aadan xaaladda Ammaan ee Soomaaliya
“Duulimaadyada aan ku bixino Soomaaliya waxba kama duwana kana an ku bixino Djabouti iyo Washington. Ma qabno wax welwel ah oo ku aadan dhanka Ammaanka” ayuu yiri Mr.Ebubekir Ikici oo waraysi gaar ah Hotel Jazeera ku siiyay Wargayska Xaqiiqa Times.
Shirkadda diyaaradaha Turkish airlines ayuu sheegay in dhowaan Soomaaliya si toos ah uga bilaabi doonto duulimaadyo Kargow ah.
“Turkish airlines ayaa waxaa ay duulimaad ku bixisaa 300 oo magaalo oo caalamka ku yaala waxaan rajaynaynaa in magaalooyinkaasi oo dhan rakaab Kaargow ah aan ka keeni doono islamarkaana kuwo ay qaadaan Soomaaliya ay gayn doonaan magaalooyinkaasi” ayuu intaasi ku daray mas’uulkaasi.
Shirkadda diyaaradaha Turkish airlines ayaa ah shirkadda kali ah oo caalami ah oo si toos ah uga howlgasha dalka Soomaaliya.
Soomaali badan ayaa ugu dhoofa aduunka oo dhan kana yimaada haba u badnaadaane dalalka Yurub.
Previous articleMaxaa ka soo baxay shirkii Farmajo iyo Boris Johnson
Next articleRw Soomaaliya oo markii ugu horaysay la kulmay shaqaalaha Xafiiska ra’iisul wasaaraha